LiDAR iyo DIELMO 3D - Geofumadas
Luulyo, 2011 Cartografia, Geospatial - GIS
DIELMO 3D SL leeyahay waayo-aragnimo baaritaan ballaaran ee processing xogta LiDAR ayaa fuliyay mashaariic badan oo qeybiyaha ah iyo soo saare xogta LiDAR ee Spain, iyo sidoo kale ka 2003 waxaa soo koraya ay software gaar ah xogta LiDAR processing bixisaa horumar la taaban karo in hana u oggolaan in software ganacsi.
Faa'iidada ugu weyn ee ay bixiso DIELMO waa in marka la shaqeynayo barnaamijkeena gaarka ah, waxaan xakameynaa dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si loo hirgeliyo macluumaadka habka tooska ah, laga bilaabo qalabyada xakamaynta tayada iyo soo saarista badeecadaha kama dambaysta ah, si qaab beddelidda, mooska , iwm, iyada oo awood u leh inay ku hagaajiyaan iyadoo loo eegayo baahida macmiilka. Dhinaca kale, waxaan si joogta ah u horumarineynaa hawlaha cusub, waxaanan leenahay qaybta R & D oo si gaar ah loogu qoondeeyay horumarinta xogta macluumaadka LiDAR, taas oo noo ogolaaneysa inaan xallino si habboon dhibaatooyinka ka soo bixi kara jiilka kala duwan alaabada lagu codsaday nooc kasta oo mashruuc ah.
Sidan oo kale, sanadihii la soo dhaafay iyo ka mahadcelinta deeqda macaamiishayada, DIELMO waxay soo saartay habab gaar ah oo loogu talagalay helitaanka waxsoosaarka LiDAR ee ugu haboon kiis kasta. Sababtan awgeed waxaan hubnaa inaan bixino xalka farsamada ugu fiican iyo khibradda ugu badan ee fulinta nooc kasta oo mashruuc ah oo la xiriira xogta LiDAR.
Khadadka tiknoolajiyada waa kuwan soo socda:
Dielmo Technology Technology
Macluumaadka xogta LiDAR, orthophoto iyo MDT iyada oo loo marayo interneetka / intranet gaar ah adduunka.
3D dhacdooyin asaasi ah oo dhidibada lagu dhisay oo ku saleysan barnaamijka lacag la'aanta ah NASA World Wind.
Nidaamka bilaashka ah ee maamulka iyo xakamaynta tayada xogta LiDAR.
Barnaamijka gudaha ee horumarinta u gaarka ah ee ku saabsan falanqaynta xogta LiDAR ee la waafajin karo baahidaada.
Dhinaca kale, waxaan ka shaqeyneynaa R + D + waxaan wadajir ula shaqeyn doonaa khabiiro kala duwan oo ay ka mid yihiin hydraulics, warshadaha, warshadaha, isgaarsiinta, injineernimada, deegaanka, iwm. si aad u hesho badeecooyin kama dambays ah oo ku haboon baahidaada ku saleysan faylka LiDAR ee qiimaha aad u hooseeya oo u oggolaanaya isticmaalka xogta LiDAR ee codsiyada dhaqaale ahaan aan la ogolaan karin dhawr sano ka hor.
DIELMO waa shirkadda Isbaanishka oo si firfircoon u soo bandhigta dhacdooyinka muhiimka ah ee la xidhiidha tiknoolajiyada LiDAR ee adduunka (ILMF iyo ELMF), iyagoo ka qaybqaatay bandhigid ganacsiyo iyo af-soomaali oo ka socda shirarka sayniska. Maamulaha DIELMO, José Carlos García, ayaa sidoo kale qayb ka ah guddiga sayniska ee ELMF (Forum LiDAR Mapping Forum) oo ka socda 2010.
Natiijada istiraatiijiyadayada caalamiga ah, DIELMO waxay hadda haysataa ganacsadeeyaal wax soo saarka iyo adeegyadayada Chile, Japan, USA, Oceania ...
Síguenos en Twitter iyo www.dielmo.com
War saxaafadeed ay soo saartay Dielmo, oo la daabacay sida loo yaqaan 'Geofumadas'.
Post Previous«Previous gvSIG, guulaysanaya Goobaha New ... loo baahan yahay! ¿Muran?
Post Next Maxay ardayda ka fekerayaan "Open Source Geospatial"?Next »